အစိုးရ ထုတ်ပြန်သော ရခိုင် အပျက်အစီး အသေအပျောက်စာရင်း အလွန်နည်းနေဟု HRW ဆို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« World Food Program မှ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း လိုအပ်
ခွပ်ဒေါင်းအလံ ကိုင်ဆောင်သူသည် လူမျိုးဘာသာ ထက် သစ္စာရှိရန် သွေးမစွန်းရန် သာ အရေးကြီး ဟု မင်းကိုနိုင်ပြောကြား »
“ ဘယ်နည်းနဲ့ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေသလဲ ဆိုတာ ကတော့ မပြောချင်ပါဘူး။ အထောက်အထားတွေအရ ပြောရ ရင်တော့ အစိုးရ စရင်းဟာ အလွန် နည်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့က (၂၁) ရက်နေ့ကနေ စတင် စောင့်ကြည့် နေတာပါ” ဟု ဆိုပါသည်။
Tags: Ashok Nigam, Burma, Human Rights Watch, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Rakhine State, Rohingya people, United Nations, United Nations High Commissioner for Refugees
This entry was posted on November 8, 2012 at 11:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.